လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအွန်လိုင်းအပြုအမူများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုအမြင်များ (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
ကလေးအထူးကု။ 2014 ဒီဇင်ဘာ; 134 (6): 1103-10 ။ Doi: 10.1542 / peds.2014-0592 ။ EPub 2014 နိုဝင်ဘာ 17 ။
Doornwaard သည် SM1, Bickham DS2, ငွေရတတ်သောသူက M2, Vanwesenbeeck ငါ3, ဗန်တွင်း Eijnden RJ3, Bogt TF Ter3.
ဤလေ့လာမှုကစုံစမ်းစစ်ဆေးသည်မှာ (၁) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် (၂) လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအင်တာနက်အကြောင်းအရာ [SEIM] အသုံးပြုမှုနှင့်လိင်သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေခြင်း (၂) လက်ခံခြင်း (ဆိုက်ဘာဆက်ဆက်ခြင်းနှင့်အထွေထွေလူမှုကွန်ယက်ဆိုက် [SNS] အသုံးပြုခြင်း]) တို့၏အပြုအမူများ၊ (1) ဤအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self- သဘောထားအမြင်ခန့်မှန်းခြင်းရှိမရှိ; နှင့် (2) မြီးကောင်ပေါက်များ၏အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်။ မိဘ၏နည်းဗျူဟာလိင် -related အွန်လိုင်းအပြုအမူများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုလျှော့ချခြင်းရှိမရှိ။
1132 တို့တွင်အလေးလှိုင်း longitudinal ဒေတာ 10th-တန်းဒတ်မြီးကောင်ပေါက်မှ seventh- (လှိုင်း 1 မှာအသက်အရွယ်ကိုဆိုလိုတာ: 13.95 နှစ်ပေါင်း; 52.7% ယောက်ျားလေးများ) စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာငုပ်လျှိုးနေတိုးတက်မှုနှုန်းကွေးမော်ဒယ် အသုံးပြု. ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေကိုခန့်မှန်းလှိုင်း4နှင့်မိဘ၏မဟာဗျူဟာမှာ self-အမြင်ရလဒ်များတိုးတက်မှုနှုန်းမော်ဒယ်များမှဆုတ်ယုတ်သွားရာလမ်း၌ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
ယောက်ျားလေးများသည်ရံဖန်ရံခါနှင့် SEIM ကိုပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။ မိန်းကလေးများ SEIM အသုံးပြုခြင်းနှင့်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများလိင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုပုံစံများမှာအမြဲတမ်းနိမ့်ကျနေသည်။ SNS အသုံးပြုမှု, သို့သော်, နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဘုံနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောကန ဦး အဆင့်များနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်နှင့်ဆက်နွယ်သောအွန်လိုင်းအပြုအမူများပိုမိုမြန်ဆန်လာခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုလျော့နည်းခြင်း (မိန်းကလေးများ၏ SNS ကိုသာအသုံးပြုသည်)၊ အင်တာနက်ကိုသုံးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂလိကအင်တာနက်နှင့်လျော့နည်းမိဘအုပ်ချုပ်မှုကို setting ကိုလိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
လိင်နှင့်ဆက်နွယ်သောအွန်လိုင်းအပြုအမူအများစုသည်လူငယ်များကြားတွင်မကျယ်ပြန့်သော်လည်း၊ ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများတွင်ပါဝင်သောဆယ်ကျော်သက်များသည်အပျက်သဘောဆောင်သောကိုယ်ခန္ဓာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုအမြင်များကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အန္တရာယ်ပိုများသည်။ ဤအပြုအမူသည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာလက္ခဏာများအားဖြင့်ပိုမိုအရေးကြီးသောမိမိကိုယ်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ SNS အသုံးပြုမှုကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသည်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်နှင့်ဆက်နွယ်သောအွန်လိုင်းအပြုအမူများကိုလျှော့ချရာတွင်မိဘများ၏အခန်းကဏ္onကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။
အင်တာနက်ကို; မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်; ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; မိဘအုပ်ထိန်းမဟာဗျူဟာ; Self-သဘောထားအမြင်; လူမှုရေးကွန်ရက်